Daawo: Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo guddoomiyay shirkii ugu horeeyay ee guddiga qaran ee abaaraha dalka – idalenews.com
Daawo: Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo guddoomiyay shirkii ugu horeeyay ee guddiga qaran ee abaaraha dalka
Muqdisho (INO) Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carteh oo isbuucii hore loo magacaabay Gudoomiyaha Guddiga Madaxbanaan ee heer Qaran ee Abaaraha ayaa shirkii koowaad ee guddiga gudoomiyay.
Mudane Carteh oo warbixino ku saabsanaa saameeynta abaaraha ka dhageystay Wasiirada dawlad goboleedyada ee ka mid ka ah guddiga ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada ku baraarujiyay in ay ka qeybgalaan caawinta dadka ay waxyeeleysay abaaraha.
Mudane Maxamed Cumar Carteh ayaa warfidiyeenada u sheegay in guddigu uu diyaarin doono hal qorshe oo ay kuwada howlgali doonaan qeybaha kala duwan ee gacan ka geysan doona gargaarkan.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka ayaa dadka Soomaaliyeed ka codsaday in ay guddiga gacan ka siiyaan howshan.
Daawo: Cumar Cabdirashiid oo xildhibaannada laga soo doortay Jubbaland ka dalbaday inay codka siiyaan
Dhageyso:Cali Khalif Galayr oo sheegay marna inaysan ku biiri doonin Soomaaliland